U bood macluumaadka
U bood qaybta dhinaca
Godax wuxuu ahaan jirey macalinka kubbadda koleyga, wuxuuna ku noolaa magaalada yar ee Lohja oo ku taala waqooyiga Yurub. Dhowr sanadood ka hor wuxuu go'aansaday inuu dib ugu laabto Muqdisho, halkaaso uu ka tagay dagaalka sokeeye awgeeda. "Finland waxaan ku fikiri jirey, Lohja waa magaalo qurux badan, yar iyo nadiif ah. Waxaan go'aansaday inaan Muqdisho u nadiifiyo sida Lohja. " Soomaliya wuxuu ku aasaasay shirkad qashin ah, wuxuuna hadda shaqaaleeyaa qiyaas ahaan 300 shaqaale.
Leila waxay Finland timid 90'kii waxayna eheed qaxooti Soomaali ah. Laba sano ka hor waxay go'aansatay in ay dib u noqoto waddankeeda dhalashada si ay uga sameyso shirkad iibiso qalabyada soo jiido quwadda qoraxda. Hadda waxay shaqo siisaa qiyaas ahaan 30 dhallinyaro. Leila waxay tiri "Sababta aan ku soo noqday Soomaaliya waxaa weeye waxaan u maleynayaa in kani yahay ganacsi fiican, laakiin shaqo-siinta dhallinyarada xittaa waa muhiim." Qalabyadeeda soo jiido quwadda qoraxda waxay beeralayda ku caawiyaan inay biyaha ka soo dhuuqaan ceelasha si ay ku waraabiyaan beeraha.
Finland waa dal ay horumarkiisa iyo heerka noloshiisuba ay ku saleysan yihiin sinnaan. Sida caadiga ah ninka iyo naagto waa shaqeeyaan hawsha gurigana waa wadaagaan.
Barashada dadka Finnishka ah iyo la sameysashada xiriir gaar ah inta badan waa kuwa gaabis ah. Inkastoo ay dadka Finnishka ah yihiin dad af gaaban, marwalba waa ka soo baxaan arrimaha lagu heshiiyo.
Finland waa dal fiican oo nadiif ah, kaas oo dadka oo dhan ay ku siman yihiin. Nolosha wanaagsan aasaaskeedu waa in qof kasta uu canshuur bixiyo islamarkaasna uu shaqadiisa uga qeybqaato hufnaanta bulshada.
Jiilaalka dheer ee Finland waa mid mugdi iyo baraf leh. Waxaa dheelitira xagaaga qurxoon oo xittaa saqda dhexe iftiinkiisa dabiiciga ah jaraa’id lagu aqrisan karo.
Barashada afka Finnishku wey adkaan kartaa billowga hore. Habka ugu wanaagsan ee inta badan shaqo iyo saaxiibo looga helo Finland waa in afka la yaqaan.
Finland waxay cadaadiska soo-galootiga ka caawineysa Koonfurta Yurub iyo Turkiga waxayna aqbalaayaan kala gudbinta gudaha Yurub iyo dib u dejinta qaxootida iyo magangelyo-doonka dalalka Yurub (EU). Inkastoo ay ayagaba xubin ka yihiin Midowga Yurub, Finland waxay mas'uul ka noqonaysaa magangelyo-doonka iyo qaxootida, waxayna midnimo tusin doonaan dalalka saddexaad.
Marka aad tahay megangelyo-doone waxaad heleysaa lacagta qaabilaadda, haddii aadan naftaada biilan karin. Ujeedada lacagta qaabilaaddu waa in laguu damaanadqaado dhaqaalaha nolosha ee aan laga maarmin mudada aad sugeyso go’aanka codsigaada megangelyada.
Ku noqo sare